TTSweet: မျက်ရည်ငှက်များ နားစေသတည်း ...
ritcivil84singapore October 24, 2013 at 1:00 PM
congratulation JU JU.......တခါမှမတွေ့ဘူးပေမဲ့ Blog မှာဝင်ဖတ်ရင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ရင်းနှီးနေမိတာကြောင့် အရင်တပတ်က Sydney မှာလျှောက်လည်ရင်း တီတီဆွိတို့များတွေ့မလားလိုက်ကြည့်မိသေးတယ်...
T T Sweet October 24, 2013 at 1:56 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်စနေက ပဏ္ဍိတရာမ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းကျွေူးရှိလို့ အဲဒီမှာ တစ်နေကုန်ပဲ။ sunday တော့ မထွက်ဖြစ်ကြဘူး။ လာမဲ့ စနေတော့ villa woodယ senior citizen hall မှာ ကျောင်းကထိန်ရှိတယ်။ဗမာအစားအသောက်တွေ စတုဒီသာ ကျွေးမှာ စုံမှစုံပဲ။ လာခဲ့ပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
ritcivil84singapore October 24, 2013 at 8:48 PM
ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..၁၉ရက် စနေနေ့ ကစင်ကာပူကိုပြန်ခဲ့ပြီမို့နောက်များတွေ့ခွင့်ရပါစေဆုတောင်းရင်း........ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
Mg Kyaw Zaw October 24, 2013 at 1:31 PM
ပျော်စရာနော် တီဆွိတို. လင်မယား ၂ယောက်လုံး ဘယ်လောက်ပျော်နေမယ်ဆိုတာ မှန်းကြည်.နိုင်ပါတယ်။
Yin October 24, 2013 at 5:44 PM
congratulation JU JU.........ဂုဏ်ယူပါတယ်ဂျူဂျူးလေး...
Congratulation Ju Ju Lay
သက်ဝေ October 24, 2013 at 7:24 PM
ဒီပိုစ့်ဖတ်ရတာ မျက်ရည်မလွယ်တတ်တဲ့သူတောင် မျက်ရည် လည်ချင်ချင်...း-)
ဂျူဂျူလေး လွမ်းလိုက်တာ အရင်လို အိုင်ဖုန်းလေး ယူယူဆော့တုန်းပဲလား
နော်နော် October 25, 2013 at 2:35 AM
မိဘ မေတ္တာလေး ဦးခြိမ့်အဖေ ကွမ်းသီးသလို ဖြစ်တာလေး မြင်ယောင်တာ။ ရှယ်ပါရစေ။
Sonata Cantata October 25, 2013 at 2:36 PM
တို့များ မျက်ရည်လွယ်တာ သူ့အဖေရော သားနှစ်ယောက်လုံးကရော ကောင်းကောင်းစလို့ကောင်းတဲ့ အကွက်ပေါ့
ဦးခြိမ့်နဲ့ ဆွိလို ၀မ်းသာလို့ လည်ရတဲ့ မျက်ရည်တွေ တို့များလည်း လည်ပြချင်သအေ...ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျပြရမယ်ဆိုလည်း ဘာအရေးလည်းနော့...
Iora October 25, 2013 at 4:13 PM
Thandar Lwin October 25, 2013 at 4:15 PM
ဖတ်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်လည်ချင်လာတယ် ။
ဂျူဂျူလေး ငယ်တုန်းထဲက သူ့အကြောင်းလေးတွေအမြဲဖတ်လာရတာ ကိုယ့်တူမလေးလိုရင်းနှီးနေရော ..
အခုလို သင်္ချာနဲ့ သိပ္ပံဘာသာရပ်တွေမှာ အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ထူးဆု၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူး ဆိုတော့ အရမ်းဝမ်းသာတယ် ။
သမီးလေးဂျူး၈ျူး ကြိုးစားသလောက်အရာထင်ပါစေ ။ ဦးခြမ့် မမဆွိတို့မိသားစု အားလုံးအဆင်ပြေ ကျန်းမျာေပ်ာရွှင်ကြပါစေ ။
Mo October 26, 2013 at 7:37 PM
Hi Ju Ju Yae,
Keep fighting! Very proud of you!
Congratulations Sis Yay :) Proud of you
မတွေ့တာကြာပြီ အစ်မရေ။ အမြဲတော့ လာကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်လေးကနေ ဦးခြိမ့်နဲ့ တီတီဆွိလို မျက်ရည်ဝဲသွားတယ်။ ဂျူဂျူလေးအတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
San San Htun October 29, 2013 at 1:07 PM
Congratulations Ju Ju ! တီတီဆွိပို့ စ်တွေထဲမှာ ဂျူဂျူလေးက ညဏ်ကောင်းပေမဲ့ ရှမ်းတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ခုတော့လည်း တော်လိုက်တာ.. ပီတိမျက်ရည်တွေပေါ့..း)
George October 30, 2013 at 12:29 PM
And another good site is FBNRadio.com to listen to the preaching and teaching of the word of God , the Holy Bible and how to get to heaven through repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ who died for all of our sins on the cross, was buried, and rose from the dead the third day, was seen of men, and went back up to heaven. And who was God manifest in the flesh.
Congratulation to Ju Ju!!
Natthamee December 4, 2013 at 10:39 AM
ဆွိရေ မတွေ့ရတာကြာပြီနော် စာရေးတာနည်း သွားတယ် စာတွေရေးပါဦး
Aunty Tint December 24, 2013 at 1:20 PM
နေပြည်တော်ရောက်နေချိန်မို့ တင်သမျှစာသားလေးတွေကို ဖေ့ဘုတ်လောက်နဲ့တင် ကျေနပ်ခဲ့ရတယ် ဆွိတီရေ...
ဒီမှာလဲထပ်ပြီး ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ ဂျူးဂျူး....
ဦးခြိမ့်ရဲ့ အရေးအသားတွေဟာ ရင်ထဲကတစ်သွင်သွင်စီးဆင်းလာတဲ့ မိဘရဲ့ စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာရေကြည်တွေပါပဲ...